“DAAWO”Wasiirka Cadaaladda oo tababar u soo xirey 17 Xeer ilaaliye | SNTV
“DAAWO”Wasiirka Cadaaladda oo tababar u soo xirey 17 Xeer ilaaliye
Munaasabadan oo tababar loogu soo xiryay 17 Xeer ilaaliye oo mudoo Lix bilood ah qaatay tababar ayaa waxaana ka qeyb galay Wasiirka Cadaaladda, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, ku xigeenkiisa, gudoomiyaha Maxkamadda Racfaanka, gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir, qaar kamid ah ururada bulshada rayidka ah ayaa maanta lagu qabtay xarunta Wasaaradda Cadaaladda ee magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Maxkamadda gobalka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur iyo Xasan Maxamed Cali Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka dalka oo goobta ka hadlay ayaa dhiirigaliyay talaabadan xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka uu ku qaatay Xeer ilaaliyaal cusub.
Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo hadal dheer ka jeediyay goobta ayaa sheegay in umadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay cadaalad isla markaana xafiiska xeer ilaalinta ay si cadaalad ah ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed.
Dr Axmed Cali Daahir ayaa ka codsaday hay’adaha ay ku qeyso in si deg deg ah u soo dhisaan gudiga adeega garsoonka oo shaqo muhiim ah u haya dalka.
“Golaha Wasiirada, Madaxweynaha, Barlamaanka, ururka Qareenada iyo cidkasta oo ay quseyso waxaa ka codsanaynaa oo walina cod dheer ugu codsanaynaa in golihii adeega garsoorka la dhiso si loo sameeyo dib u habeynta garsoorka dalka” ayuu yiri Dr Axmed.
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowladda Somaaliya C/laahi Axmed Jaamac “Ilojir” ayaa kula dardaaramay xeer ilaaliyeyaasha maanta tababarka loo soo xirey in wixii ay barteen si cadaalad ah ugu adeegaan dadka Soomaaliyeed oo ku ooman cadaalad barax la’.
“Aqoonta aan barateen iyo siminaarka aad qaadateen mudada Lixda Bilood ah ka dhiga mid camal ah” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya.
Wasaaradda Cadaaaladda Xukuuamdda Somaaliya Mudane C/laahi Axmed Jaamac ayaa sidoo kale sheegay in Wasaaradu ay xooga saari doonto sidii loo heli lahaa dad aqoon iyo khibarad u leh arimaha cadaalada oo tababaro siiya dhalinyarada cusub.